Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) Pig Brain (37758-47-7) Soosaarayaasha - Phcoker
Budada GM1 si aad ah ayaa loogu isticmaalay in lagu daaweeyo dhaawaca maskaxda ee dhalashada hypoxic-ischemic, cudurka Parkinson… ..
Monocotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) maskaxda doofaarka (37758-47-7) video
Monosyalotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) maskaxda doofaarka (37758-47-7) Sharaxaad
Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) maskaxda doofaarka (37758-47-7), magaca gaaban wuxuu noqon karaa GM1, oo laga soo saaray maskaxda doofaarka wuxuuna xubin ka yahay taxanaha ganglio ee gangliosides oo ay ku jiraan hal hadhaal sialic acid ah.
GMl waxay kor u qaadi kartaa dib u soo kabashada hawlaha neerfaha kadib dhaawaca habka dhexe ee neerfaha ee sababo kala duwan, kor u qaadista neuroplasticity. Tijaabadu waxay muujinayaan dhaawaca maskaxda ee maskaxda GMl, maskaxda qalafsan si loo soo celiyo unugyada dareemayaasha ee kudhaca cirridka laf-dhabarta waxay leedahay saameyn difaac ah oo kor u qaada kaalinta unugyada.
Maxkamadeynta hore ee II ee kiliinikada ayaa muujisay, waxay hoos u dhigi kartaa neerotoksicin-oogista xuubka (OIN). Laakiin ma aysan shahaadin tijaabo wajiga III. Waxaa loo baahan yahay tijaabo wajiga III ah si loo baaro saameynta iyo nabadgelyada monotetrahexosylganglioside Sodium Wareegidda ka hortagga OIN ee kansarka caloosha.
Monocotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) maskaxda doofaarka (37758-47-7) Specifixafiisyada
Product Name Monocotetrahexosylganglioside Sodium (GM1) maskaxda doofaarka
Magaca Kiimikada Monosialotetrahexosylganglioside Sodium (Maskaxda Porcine)
isku xigxiga /
Fasalka Daroogada Sphingolipids
Molecular Wsideed 1563.85
barafku Psaliid N / A
Biological Life-Life /
Color Dufanka lyophilized-cad-cad
milmi chloroform / methanol (9: 1): 10 mg / mL, cad, midab lahayn
kaydinta Temperature -20 ° C
Application Receptors gaarka ah ee daacuunka sunta ah ee ku urursan maskaxda ee lipidosis sonkorta.
Qalabka imtixaanka Heerarka Tayada Guriga
Chaxajmiga Dub ama cad cad; wax yar oo aan nacnacnayn, oo aan dhadhamin; qoyan. Badeecadani waa mid biyaha lagu dhalaalayo, waxoogaa yar ayaa lagu kala diri karaa methanol, ku dhowaad xallin la'aanta ethanol anhydrous.
Xasaasaynta midabaynta 1 Qaado baaritaanka 0.2ml adoo raacaya go'aaminta mawduuca, ku dar biyo 2ml, ka dibna ku dar xalalka Hydroquinone hydrochloric acid (hydroquinone 0.2g, ku dar biyaha 10ml, ku dar xaddiga hydrochloric acid 90ml, kudheer 0.1mol / L Nacxumada Sulfat sulfate 0.25ml, Xabbad Tijaabin) 2ml, kuleylka kuleylka kuleylka 15, xalal buluug iyo guduud ah, oo leh cabitaanka khamriga 5ml Vibration, iyo lakabka alkolku waa buluug.
Xasaasaynta midabaynta 2 Qaado badeecadan oo ku saabsan 20mg, ku dar kiimiko leh acetic acid 1ml, kuleylka kulul ee kulul kulul si buuxda u kala diri, ku dar saddex seddax shaybaar oo tijaabo ah 1, dareeraha biyaha kulul ee derbiga tuubada si tartiib ah ugu dar sulfuric acid 1ml, si ay xal ugu noqdaan laba lakab , interface labada-dareere ah waa in la mariyaa brown
Sodium cusbada Tilmaaminta calaamadaha cusbada sodium ee sheygan (Daawada Chinese Pharmacopoeia 2015 afar afar 0301).
Shukulaatiyada Liquid (LC) Marka la eego garaafka shaxanka ee lagu qoray go'aaminta maaddada, waqtiga xajinta ee ugu sarreeya ee xallinta baaritaanka waa inay ahaato mid joogto ah wakhtiga lagu hayo ee ugu muhiimsan ee xakamaynta xakamaynta.
Muuqaal sawir-qaade ah Khariidadda nukliyeerka nalalka iftiimiya ee sheygan waa in ay la socotaa khariidada wax soo saarka xakamaynta (Shay Pharmacopoeia 2015 edition afar 0402).
Cadaanta iyo midabka xalka Waa in la caddeeyaa midab aan lahayn; haddii ay daruuri tahay, ma noqon doonto mid ka sii dhererka dareeraha caadiga ah ee tirakoobka 1th; Haddii rinjiyeynta midabku aysan aheyn mid ka qoto dheer marka loo eego xalka Yellow No. 1th colorimetric.
Go'aanka Cadaadiska Sare Xalka dhamaystiran waa inuu ahaadaa mid cad oo hufan kadib heerkul sare, aan lahayn iftiin caano, ma jiro roobab
Cilladda dhalashada (Kala duwanaanta borotiinka) ≤50000
Wadarta Sialic acid Sida laga soo xigtay xisaabinta qalalan ee qallalan, candhuufka ay ku jirto acid waa inay ahaataa 19.0 ~ 21.0%
walxaha la xiriira Sialic acid ≤0.3%; GD3, GD1a, maqaarka aan la aqoon waa ≤ 0.5%; nijiyada iyo ≤2.0%
Miisaannada miisaanka oo badan ≤0.5%
Xalka dareeraha ah Methanol ≤ 0.1%; acetone ≤ 0.3%; Trichloromethane ≤0.003%
Ka haraaga gubashada ≤5.0%
Biraha culus ≤20ppm
Saamayn aan caadi ahayn Xeerarka u hoggaansama
Walxaha nabarrada Waa inay ahaataa mid waafaqsan xeerarka (tiro badan oo maamul ah)
Pyrogen Waa inay ahaataa mid waafaqsan xeerarka (tiro badan oo maamul ah)
Xaddidaad microbial Tirada guud ee bakteeriyada aerobikada waa inay noqotaa <100cfu / g, iyo wadarta guud ee wasakhaha iyo khamiirka waa inay ahaadaan <50cfu / g
Khaas ah ≥98.0%
qaydhiin MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) budada (37758-47-7) Tafaasiisha
Monocotetrahexosylganglioside Sodium (37758-47-7), magaca gaaban wuxuu noqon karaa GM1, laga soo saaro doofaarka doofaarka waana xubin ka mid ah taxanaha ganglio ee gangliosiyo kuwaas oo ku jira hal siyood oo siyari ah.
GM1 waxay dhiirrigelin kartaa dib u soo kabashada shaqada neerfaha ka dib dhaawaca nidaamka neerfaha ee sababaha kala duwan, waxay dhiirrigelisaa neuroplasticity. Tijaabooyinku waxay muujinayaan dhaawaca maskaxda ee maskaxda GM1, maskaxda naxdinta leh si loo soo celiyo unugyada dareemayaasha ee dhaawaca laf-dhabarka waxay leeyihiin saameyn difaac waxayna kor u qaadaan doorka unugyada.
MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) budada (37758-47-7) Farsamaynta ficilada?
GM1 (monosialotetrahexosylganglioside) “prototype” ganglioside, waa xubin ka tirsan taxanaha ganglio ee gangliosides oo ay ku jiraan hal hadhaal sialic acid ah. GM1 waxay leedahay astaamo jireed oo muhiim ah waxayna saameyn ku yeelataa baaxadda neerfaha iyo hababka dayactirka, iyo sii deynta neurotrophins maskaxda. Ka sokow shaqadeeda jir ahaaneed ee maskaxda, GM1 waxay u shaqeysaa sidii goob loogu talagalay labada daroogo daacuunka iyo E. coli kuleylka-kuleylka ah (shuban-biyoodka socdaalka).
Faa'iidooyinka of MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) budada (37758-47-7)
Ganglioside GM1 waa xubin ka mid ah qoyska ganglioside oo loo isticmaalo wadamo badan waxaana loo maleynayaa inay tahay daaweyn kale oo lagu kalsoon yahay oo looga hortago cuduro badan oo neerfaha ah, oo ay ku jiraan dhaawaca maskaxdu. Dhibaatooyinka daweynta ee GM1 ayaa lagu xaqiijiyey labadaba labada qofba iyo dadka waaweyn ee ku xiga dhaawaca isdifemiska.
talinayo MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) budada (37758-47-7) Qiyaasta
Daroogada waxaa lagu siiyay qiyaasta 20-40 mg maalin kasta iyadoo la siinayo duritaanka xididka ama tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah Marxaladda degdegga ah ee isbeddelada cudurada: Daawada waxaa loo isticmaalay xaddiga 100 mg maalin kasta iyadoo la adeegsanayo duritaanka xididka; Ka dib toddobaadyada 2-3, guud ahaan ilaali qadarka 20-40 mg maalin kasta muddo lix toddobaad ah, qiyaasta ugu horreysa ee 500-1000 mg waxaa lagu maamulaa faleebada xididka ee cudurka Parkinson; tan iyo maalintii labaad, daroogada waxaa loo isticmaali jiray qiyaasta 200 mg maalin kasta iyadoo la adeegsanayo subcutaneous, intramuscular injection ama faleebo xididada 18 toddobaad sida caadiga ah. markii dawadan lagu siiyay Subcutaneous ama irbadda xididka, waa in la kala dilaa oo lagu qasi karaa biyaha si loogu duro illaa inta laga helayo 10 mg / ml at the; marka dheecaanka xididka la qaato, daroogada waa la jeclaa oo lagu qasi jiray 0.9% sodium chloride injection or 5% cirbadeynta gulukooska.
Dhibaatooyinka ay keento of MONOSIALOTETRAHEXOSYLGANGLIOSIDE SODIUM (GM1) budada (37758-47-7)
Saameynta daawada ah ee budada GM1 ayaa badanaa dillaacan ka dib isticmaalka.